Fiiro si faahfaahsan: Ma ogaan kartaa haweenkaas uurka ku jira? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Fiiro si faahfaahsan: Ma ogaan kartaa haweenkaas uurka ku jira?
Fiiro si faahfaahsan: Ma ogaan kartaa haweenkaas uurka ku jira?
Jimicsigu aad ayuu muhiim u yahay jirka, xitaa waa lagula talinayaa haweenka uurka leh si aad u guurto waqti ka waqti.
Sidaas darteed si toos ah uma ogaan kartid cidda uurka leh ama aysan ku xirnayn inta jeer ee ay ciyaaraan cayaaraha, taasina waa sababta keentay farsamadan si gaar ah u xiiso badan.
Sawirka hoose, waxaan leenahay saddex haween ah oo sameeya noocyo kala duwan layliyo : baaskiil, miisaan, iyo yoga.
Saddexda haween ah ayaa diiradda saaraya tababbarkooda, laakiin halkan ayaa ah qodob: mid ka mid ah ayaa uur leh. Ujeedada buuggani waa inuu helo midkee.
Haddii aad leedahay dareen macquul ah oo lagu fiirsanayo, waa inaad awood u heshaa inaad hesho jawaabta adoo si sahlan u eegaya haweenay kasta, oo aan ka badnaynin labaad ama laba. Laakiin ma aha wax muhiim ah haddii aad u baahan tahay wakhti dheeraad ah si aad u hesho calaamadaha.
Waxaa laga yaabaa in liiska baaskiilku uu doorto jimicsi u baahan in la fadhiisto sababtoo ah waxay ka daalay uurka. Ama waxaa laga yaabaa in uu yahay culeey aan u ogolaanin uurkiisa inuu joojiyo inuu muujiyo dhinaciisa adag oo xoog leh. Ama waxaa weeye dhar jilicsan oo isku daya inuu ku nasto.
Marka, waxaad heshay jawaabta? Haddii aadan weli helin, halkan jawaabta ayaa ah: haweeneyda uurka leh waxay ku jirtaa lambarka 3.
U fiirso aragti dhow oo waxaad arki doontaa ilmahan yar ee baraashiisa. Marka aan eegno caloosha, waxaan u qaadan karnaa in ay aad u horumarsan tahay uurkeeda, sax?
Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysatay arimahaan oo aad hadda leedahay dareen macquul ah hadaad ka heshay jawaabta marka hore aragtidaada. La wadaag kuwa aad jeceshahay si ay u arkaan haddii ay noqon doonaan sida ugu dhakhsaha badan!
Yaa ogtahay, inay xitaa leeyihiin jawaab sax ah!
Pumpkin Seeds - Aad u fiican in la yareeyo kolestaroolka xun iyo hagaajinta caafimaadka beerka iyo wadnaha